ယောဟန်အောင်: ပြူတင်းပေါက်က မိုးရေစက်တွေ
ထိုင်းသီချင်းကလေး တပုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဒီသီချင်းက လွန်ခဲ့တဲ့ ၆-၇ နှစ်ကတည်းက နာမည်ကြီးကျော်ကြားတဲ့သီချင်းလေးပါ။ ဆိုတဲ့သူက ဂီတာသမား-အဆိုတော်- တေးရေးဆရာ ဖြစ်တဲ့ Seksan Sukpimay (ဆက်ဆန် ဆွတ်ပီမေ) ဖြစ်ပါတယ်။ “ဆက် လိုဆို” လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့ တီးဝိုင်းနာမည် “လိုဆို” နဲ့က ပိုလို့ လူသိများပါတယ်။
သူနာမည်ကလည်း ထူးခြားတယ်။ ထိုင်းမှာက အထက်တန်းစား လူတန်းစားဆိုရင် High Society အတိုကောက် “ဟိုက်ဆို” လို့ ခေါ်ကြတယ်။ သူ့နာမည်သဘောက “လိုဆို” အဓိပ္ပါယ်က “အောက်တန်းစား” လို့ ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။ သူ့ သီချင်း ကလေးတွေ ကျနော်ကြိုက်တာ တော်တော်များတယ်။ သီချင်းစာသားကလေးတွေက ကဗျာဆန်သလို၊ ရစ်သမ် မိတယ်။ သူ့အသံ ၀ါ ကလည်း ကောင်းလှတယ်။
သိပ်အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့။ ကျနော်က ထိုင်းစကားကို ထမင်းစားရေသောက်သာ တတ်တာပါ။ ဘာပြောသလဲ ဆိုတာ လောက်တော့ ရိပ်မိရုံပါ။ ဒီစာသားအပြည့်အစုံကိုတော့ အင်တာနက်တွေထဲက Lyric တွေ အကူအညီလည်း ယူရတာပ။
ခင်ဝမ်းရဲ့ “လွမ်းတယ်” သီချင်းကလေးနဲ့ မတူလား...
ဒီနေ့ မိုးတွေရွာ ပြူတင်းပေါက်မှာ စီးဆင်းလာ
မင်းကလေးက ငါ့ကို သတိမှ ရပါ့မလား...
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့ကတောင် တို့တွေ့ဆုံလိုက်ရ
ငါ့မှာ ဘယ်သူမှ ပိုင်သူမရှိသေးမှန်း
မင်းမှာ ချစ်နေသူ ရှိနေရင်တော့ ဆွေးရတော့မှာပဲ
ရီးစားလည်း ရှိနေနိုင်တာပေါ့... သိရရင်တော့ ကောင်းလိမ့်မပေါ့။
ငါ့အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှာပဲ ထင်နေခဲ့
မင်း မျက်လုံးတွေထဲကို ကြည့်ပြီး
Fon tok tee na-tang
wun nee fon dtok lai long tee naa dtaang
Today it rained and it flowed down the window.
ter kit teung chun baang mai nor ter
I wonder if you think about me at all.
meua wun jun tee laew song rao yung dai jer ter song yim maa
Last Monday, the two of us met. And you smiled at me.
nung yoo kon dee-o lee-o mong tee naa dtaang
Sitting alone, I turned to look out the windows.
haak mee ter kaang kaang gor kong ja sook jai
If I had you here with me, I'd be so happy.
ter kong mai roo waa chun eng yung mai mee krai haak ben ter gor kong kao tee
Of course you don't know that I don't have anybody now. If it was you, that would be so great.
ter art ja mee krai kon nun tee saen dee suan chun kon nee gor kong ja sao jai
You might have someone who's just wonderful. And this makes me feel sad all over.
ter art ja mee faen laew gor ben dai gor yung song sai yung yaak ja roo
Or it's possible that you already haveaboyfriend. I am not certain about this...I still want to know.
wung kae piang ter mee jai hai suk noi
I only hope that you're curious as well
fao dtae ror koi piang ter bork ruk maa
I only hope that you still have some concern for me.
sook jai ying nuk tee chun dai piang kae mong dtaa gup ter gor sook soot hua jai
I'd be extremely happy. If I could just look into your eyes. I'd be the happiest man.
gor sook soot hua jai
I'd be the happiest man.
Posted by Yaw Han Aung at 10:08 PM
Labels: Loso, Thai, သီချင်းများ
Blog Archive August (10) July (8) June (2) May (1) February (5) January (2) December (5) October (3) September (4) March (1) January (2) June (1) May (1) November (1) May (1) March (11) February (22) January (4) December (7) November (3) October (6) September (4) August (4) July (8) June (1) May (5) April (4) March (4) February (4) January (4) December (7) November (4) October (5) September (4) August (8) July (11) June (4) May (5) April (4) March (3) February (4) January (4) December (4) November (8) October (5) September (4) August (7) July (4) June (5) May (6) April (10) March (12) February (40) January (7) October (6) September (1) August (4) July (1) April (3) March (13) February (26) January (17) December (14) November (20) September (1) July (2) June (3) April (1) March (17) February (8)